Nosy Marquesas, paradisa | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | Toerana fitsangatsanganana, mpitarika
Tendrombohitra, zavamaniry maitso mavana, ranomasina manga, morontsiraka sy masoandro, famintinana tsara ny inona ny Nosy Marquesas. Ity nosikely ity dia 1.500 kilometatra miala an'i Tahiti ary tena paradisa izany.
Raha tianao ity karazana sehatr'asa ity, ny kolontsain'ny Pasifika, fitsangatsanganana mivantana ary ankafizo ireo hetsika ivelany, mandehandeha amin'izay nalehan'i Gauguin sy Brel na nisitrika tamina tontolo anaty rano mahafinaritra, dia ny Marquesas no tanjonao, tahaka ny ankehitriny ihany. Lasa izao!
Nososy izy ireo izay 1.500 kilometatra miala an'i Tahiti ary misy manodidina nosy roa ambin'ny folo, fa enina ihany no mponina. Ankehitriny dia manana mponina manodidina ny 9200 izy ireo ary ny foibem-pitantanana dia Nuku Hiva.
Ny nosy dia fifangaroana tsara amin'ny morontsiraka fasika mainty miaraka amin'ireo helodrano manonofinofy. eFA moutains, Tienen lohasaha, Tienen riandrano, ka ny hetsika atolotray dia maro: mitaingina soavaly, mandeha an-tongotra, 4 × 4 mitaingina jip, mitsoraka, snorkeling… Ary araka ny efa nolazainay tetsy ambony, ireo mpanakanto Gauguin sy Brel dia nitety tanàna teto tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX nitady fandriam-pahalemana kely. Ary hitan'izy ireo mandrakizay izy satria eto aza ny fasany, ao amin'ny Cemetery Calvaire.
Tsy toy ny nosy hafa any Polinezia frantsay, eto tsy misy laguna na haran-dranomasina miaro ny morontsiraka. Zanaka nosy volkano maranitra maranitra, tendrombohitra maranitra nipoitra avy amin'ny fipoahan'ny magma, izay misy ala sy lohasaha lalina. Momba izany iray amin'ireo archipelagos lavitra indrindra eto an-tany, lavitra ny kontinanta kontinanta, hany ka manana ny faratampony manokana izy ireo.
Ny nosy lehibe indrindra ao amin'ny vondrona dia Nuku Hiva. Fantatra amin'ny anarana hoe Mystic Island ary manana tranonkala mahaliana maro: ny Riandranon'i Valley Valley, ny fahatelo avo indrindra eto an-tany, ny morontsiraka mainty Anaho, lava-bato ao anaty rano mitazona zavamaniry sy zavamaniry mahavariana ary ny Katedraly Notre Dame miaraka amin'ny sary sokitra hazo sy vato isaky ny nosy. Eto ny tanàna lehibe Taiohae, renivohitry ny fitantanan'ireo nosy.
Ny haavony avo indrindra dia ny Tendrombohitra Tekao, amin'ny 1.185 XNUMX metatra, ary tsy manana haran-dranomasina na amoron-tsiraka fisaka. Ny nosy manana harena ara-tantara maro, Trano vato sy fiarovana mimanda ary tempoly amin'ny fomba poloney. Nampidirin'i Frantsa izany tamin'ny 1842. Natokana ho an'ny varotra hazo sandaly izy io ary nijanona ho an'ireo mpanjono trozona, mba hanokan-tena bebe kokoa amin'ny fanondranana voankazo.
Manana morontsiraka andrefana be ity nosy ity, ary misy lohasaha kely misokatra mankeny anaty lohasaha lalina. Tsy misy tanàna manodidina eto. Any amin'ny morontsiraka avaratra no misy ny seranan-tsambo roa manandanja indrindra, miaraka amina hantsana lalina: Anaho sy Hatihe'u A'akapa. Amin'ny lafiny atsimo dia misy bay hafa ary eto misy seranana bebe kokoa. Any afovoan-tany dia misy ala maitso izay iompiana omby.
Araka ny efa nolazainay teo aloha, ny foibem-pitantanana dia Taioha'e, atsimo. Efa nahita ve ianao Survivor, ny andiany TV? Tany Nuku Hiva, ny fizarana fahefatra dia nalaina sary an-tsary, tamin'ny 2002.
Ny Nosy Marquesas dia mizara ho nosy avaratra, misy valo ary anisan'izany i Nuku Hiva; ireo nosy atsimo, fito ary dongon-tany sasany izay tsy tonga nosy kely any avaratra. Ny nosy faharoa manandanja indrindra dia Hiva Oa, koa ny nosy faharoa lehibe indrindra amin'ny vondrona ary ao amin'ireo nosy atsimo.
Ity ny tanànan'ny seranan'i Atuona ary ity tranonkala ity matetika no seranana voalohany miampita ny Pasifika mankany andrefana. Azontsika lazaina izany Io no nosy manana ny tantaran'ny vondrona indrindra satria misy sarivongana Tiki efa antitra ary io no toerana toerana nahafatesan'ny mpanao hosodoko Paul Gauguin sy ilay mpitendry zavamaneno Jacques Brel. Izy io koa dia fantatra amin'ny hoe Zaridaina Marquesas satria tena maintso sy mahavokatra izy.
Hiva Ova dia manamorona morontsiraka morontsiraka sy harambato toerana anaovana ny antsitrika, saingy na izany aza dia nosy izay toa mitokana irery indraindray, mangina, saika mitoka-monina. Ny tanàna manan-danja indrindra dia Atuona, amin'ny faran'ny atsimon'ny Helodrano Taaao, arovan'ny tendrombohitra roa avo indrindra amin'ny nosy, ny Tendrombohitra Temetiu ary ny Tendrombohitra Fe'ani.
Nosy iray hafa dia Ua Pou, nosy fahatelo ny habeny. Manana goavana izy io tsanganana basalt, vokatry ny hetsika volkano, izay natao batemy tamin'ny anaran'ireo mpiady malaza, Poumaka sy Poutetaunui. Tamin'ny 1888 dia ireo andry ireo no nanome aingam-panahy an'i Robert Louis Stevenson hilaza fa nitovy izy ireo andohalambo volkanika izay manopy ny mason'ny tokotanin'ny fiangonana, satria mijery ny helodranon'ny tanàna Hakahau, ny zava-dehibe indrindra amin'ny nosy izy ireo.
Ua Huka dia manana hatsarana tsy mampino, saika virjiny. Misy soavaly dia, mametraka ny lokon'ny tany efitra, osy ... I Tahuata dia ho an'ny nosy kely indrindra izay onenana azy. Saingy fantatry ny mpikaroka britanika malaza, Kapiteny Cook, izay nitsidika azy io tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Ny rano avy any Hiva Ova ihany no azo idirana noho izany dia fitsangatsanganana an-tsitrapo. Ireo lohasahaka mahavokatra dia tsy tazana ny bay amin'ny rano madio, miaina milamina ary mitondra ny menaka manitra eo an-toerana, ny Love potion araka ny lazain'izy ireo eto, menaka zato taona.
Fatu hiva manana hantsam-bato mijoalajoala izay milentika any anaty ranomasina izy ary manome fomba fijery manaitra avy any ambony. Tamin'ny 1937, ilay mpikaroka tany Thor Heyerdahl sy ny vadiny, dia nijanona kelikely nipetraka teto ary namintina ny zavatra niainan'izy ireo tamina boky. Toa tsy niova firy izany hatrizay. Ny ankamaroan'ny mponina dia monina ao amin'ny vohitra Omoa sy ny manodidina azy, seranan-tsambo. Ny faritra Hana Vave dia arovan'ny malaza Bay de virijiny, tsara tarehy amin'izay jerenao, indrindra amin'ny filentehan'ny masoandro ...
Tianao ve ireo nosy ireo? Raha tsapanao ny mihaona amin'izy ireo manokana dia diniho ny fampahalalana azo ampiharina izay avelako ery ambany, fantatro hatrany fa nosy tsy ao amin'ny làlan'ny fizahan-tany Polinezia frantsay mahazatra izy ireo: Nosy Island, Bora Bora, Moorea, Tuamotu Atoll ary ny Nosy Leeward.
misy nosy enina monina ary ny efatra manana seranam-piaramanidina, fa eo an-toerana, mba hahafahanao mankany amin'ny alàlan'ny fiaramanidina na sambo. Raha misafidy ny fiaramanidina ianao dia manidina avy any Tahiti miaraka amin'ny sidina isan'andro mankany Nuku Hiva sy Hiva Oa. Mba handehanana any amin'ireo nosy hafa dia tsy maintsy mamakivaky ny iray amin'ireo ianao. Raha mifidy ny handeha amin'ny sambo ianao, ny tena izy dia na iza na iza mandeha amin'ny alàlan'ny Polinezia dia mitondra anao, mila mitady safidy fotsiny ianao, ohatra, Tahiti Voile et Lagoon na Poe Charter na ireo sambo fitsangatsanganana Aranui 5, izay mandeha an-tsambo indray mandeha isan'andro. volana nefa dia manodidina ny 3 euro isan-kerinandro izy ireo. Raha manana sambo fitaterana anao ianao dia afaka miala amin'ny Galapagos na ny Nosy Cook.
hifindra eo anelanelan'ny Nosy Marquesas azonao atao ny manidina, eo anelanelan'ny nosy lehibe roa dia misy sidina iray na roa isan'andro. Ny nosin'i Ua Pou sy Ua Huka dia tsy manam-bintana amin'ny sidina isan'andro. Ny hevitra tsara dia ny mividy ny Mandalo miaraka amin'i Tahiti Air i Marquesas. Azonao atao ihany koa ny mihetsika amin'ny sambo, manakarama olona eo an-toerana, manofa ny sambonao. Misy sambo kaominaly ao anatin'ny Marquesas del Sur, izay mankany amin'ny nosy Tahuata sy Fatu Hiva (manodidina ny 65 Euros dia mandroso mandritra ny adiny dimy).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » mpitarika » Nosy Marquesas, paradisa
Inona no jerena ao Sanlúcar de Barrameda